Amathiphu ayi-10 we-LinkedIn Wempumelelo Yakho Yokuxhumana | Martech Zone
Amathiphu ayi-10 we-LinkedIn Wempumelelo Yakho Yokuxhumana
NgeSonto, Okthoba 11, 2015 NgoLwesibili, Januwari 11, 2022 Douglas Karr
Le infographic evela ku-SalesforLife igxile ekutheni iphrofayili ye-LinkedIn ingenziwa kanjani ukuthengisa. Ngokubona kwami, yonke imininingwane ye-LinkedIn kufanele ilungiselelwe ukuthengisa… uma kungenjalo kungani uku-LinkedIn? Inani lakho emsebenzini wakho libaluleke kakhulu njengenethiwekhi yakho yobuchwepheshe.
Lokho kusho, ngikholwa wukuthi abantu abaningi benza umonakalo ngokusebenzisa kabi ipulatifomu noma cha isebenzisa iphrofayili yabo ye-LinkedIn. Omunye umkhuba engingathanda ukuwuyeka ukuzama ukuxhumana nabantu ongabazi. Ngiyabona ukuthi ubheke ukukhulisa inethiwekhi yakho, kepha isimemo esingenalutho akuyona indlela yokwenza kanjalo. Xhuma nami ngemithombo yezokuxhumana, uthole ingxoxo, ungazise ukuthi kungani ukuxhumana nawe kungabaluleka - futhi ngingaxhuma kakhulu!
Iphrofayili yakho ye-LinkedIn akufanele ibe yimpumelelo yakho - ayiqondene nempumelelo yakho noma ukuthi usichithe kanjani isilinganiso sakho. Esikhundleni salokho, kufanele kube okugxile kumakhasimende, kugxile kunani ongalinikeza kumathemba nakubathengi abangaba khona. Phendula lo mbuzo: ngingabasiza kanjani abathengi bami? Nakhu ukuthi ungakha kanjani iphrofayili eyi-LinkedIn ephelele yokuThengisa Komphakathi.
Ungayisebenzisa Kanjani Iphrofayili Yakho Ye-LinkedIn
Isithombe sangempela – Angixhumi emakhathuni noma ezithombeni ezingenalutho. Ubuso bakho yisici esibonakala kakhulu onaso, sibeke ku-inthanethi. Ngiyinsizwa empunga, endala, eyisidudla… Ngisafaka isithombe sami ku-inthanethi. Nawa amanye amathiphu okuthola okuhle Isithombe sephrofayela ye-Linkedin (futhi kungani besebenza!).
Isihloko Sakho - Isihloko sesikhundla asinikezi inani oliletha kwabanye. Ungadluli futhi ngicela ungagxili ekubeni usozigidi.
Shicilela Okuqukethwe - Nikeza izivakashi okuqukethwe okufanele lapho zingabona khona ubuchwepheshe bakho ngaphakathi kwemboni yakho.
Hlanganisa Isifinyezo Sakho - Isihloko sakho sithathe ukunaka kwabo, manje sekuyisikhathi sokunikeza umbala othile kanye nocingo olukhulu esenzweni.
Yabelana ngokuqukethwe okubonakalayo - Njengoba izivakashi ziskena ikhasi lakho, nikeza ngokuqukethwe okubukekayo okuheha iso futhi kwehlukanise iphrofayili yakho kwabanye.
Isipiliyoni ngemiphumela - Umlando wakho womsebenzi awunandaba nemiphumela oyizuzile kulezo zikhundla.
Ukuvunyelwa - Ngenkathi zisetshenziswe ngokweqile futhi zinganakwa, iphrofayili engenakho ukuvumela ayikhangi ngokubonakalayo. Zitholele okwakho!
Izincomo - Ngokungafani nokugunyazwa, osebenza naye ochitha isikhathi sakhe enza izincomo ezifanelekile ubaluleke kakhulu.
Faka okushicilelwe - Uyabelana futhi ubhala kwenye indawo? Qiniseka ukuthi ungeza lezo zingxenye kuphrofayela yakho ye-LinkedIn ukuze izivakashi zikwazi ukubona ubuchwepheshe bakho.
Ama-Honours Nemiklomelo - Siphila emhlabeni lapho ukuzibandakanya kwakho kwezenhlalo nezomphakathi kuyinto ebalulekile ekunqumeni ukuthi ungumuntu onjani. Uma ubonile, yabelana ngakho.
Qiniseka ukuthi ubheka iphrofayili yakho njengoba ibonwa ngumphakathi nangokuxhumana ukuze ukwazi ukuthuthukisa nokwandisa iphrofayili yakho. Ngakwesokunene, i-LinkedIn inikeza ngisho negeji yamandla wephrofayili yakho… yisebenzise! Ngingancoma futhi ukuthuthukela kokubhaliselwe okukhokhelwayo ku-LinkedIn. Ngaphandle kokwehlukanisa iphrofayili yakho nokwandisa ukubonakala kwayo, inikeza ngamathuluzi amahle wokukhomba ukuthi ngubani obuka iphrofayili yakho nokuthi ungaxhumana kanjani nabanye.
Tags: infographicokuqukethwe kwe-linkedinizincomo ze-linkedinisipiliyoni se-linkedinIsihloko esikhulu se-linkedinnokwenza kahle kwe-linkedinisithombe se-linkediniphrofayli ye-linkedinizincomo ze-linkinukuthengisa impilo yonkethengoku
Ungayimaketha Kanjani Uhlelo Lokusebenza Lweselula